Inzuzo: Imali Eqinisekisiwe Yabo Bonke Amamerica
Isayensi Yezenhlalakahle Economics
Ukuqeda ububha noma ukugqugquzela ukusebenza?
Khohlwa mayelana nokudinga izinzuzo zokungasebenzi . Heck, ukhohlwa ngisho nokudinga ukuba nomsebenzi. Ngaphansi kwecebo "lokunciphisa", konke okuzodingeka ukwenze ukuze uthole isheke esihle njalo ngenyanga kusuka kuhulumeni akupheli ejele.
Njengoba kuchaziwe ngumhlanganyeli ohlangene no-Krystal Ball we-MSNBCs '"I-Cycle," inkolelo yezimayini ilula. Ngokuqeda zonke ezinye izinhlelo zokuphepha zokuthola imali ezifana ne- Social Security ne-Medicare, uhulumeni wesifundazwe angakwazi ukunikeza wonke "isakhamuzi esingumuntu ongakhulumi" esizweni "imali encane yenyanga engenayo."
Encwadini yakhe ethi In Our Hands: Uhlelo Lokufaka Isikhundla Senhlangano Yenhlalakahle, umbhali we-libertarian uCharles Murray ulinganisela ukuthi ngokusebenzisa umncintiswano, uhulumeni wesifundazwe anganikeza wonke umuntu omdala waseMelika amasheke angama-$ 10,000 ngonyaka.
Lokhu, okuthiwa iBhola, bekuyokwanela ukuba "kuqede ubumpofu" ngokuphelele e-United States.
Kunzima Ukuthengisa Abanikeli Bokuphepha Komphakathi
Yiqiniso, kuzosho nokukholisa ngaphezu kwezigidi ezingu-63 zokuthola umhlalaphansi wezenhlalakahle zezenhlalakahle ukuze bathole ngenjabulo imali yabo engaba ngu-R15 000 ngonyaka ngokubuyisela i-"10,000" ye $ 10,000. Kungenzeka kungabi lula ukudayisa, lapho.
Ukwazisa ukuthi abantu abaningi bazothola uhlelo lokunciphisa "umqondo ophuthumayo we-left-wing utopian wokuthi kuphela uMarxists onjengoKrystal Ball noPapa Francis abangase basekele," ibhola laqhubeka liphawula ukuthi lolu hlelo "seluthole ukusekelwa ngakwesokudla," kusukela ukuthandwa kukaMatewu Freeney weConstruction, umgcinisihlalo wezimali owake wachaza ukunikeza "abampofu imali" mahhala.
I-Canadian Mincome Experiment
Ibhola liphinde lisho ukuhlolwa okwenziwe edolobheni laseCanada laseDauphin, eManitoba, lapho abantu abangamaphesenti ama-30 emadolobheni abanikezwa "amaminerali" kusukela ngo-1974 kuya ku-1978. Ngezindleko zamaRandi ayizigidi ezingu-17 kuhulumeni waseCanada, lo mzamo kwakufanele ukunquma ukuthi ukuhlinzeka ngemali engenayo engenayo, engenayo intela kuzokwenza ngcono impilo nempilo yomphakathi.
Ngokusho kweBhola, ukuhlolwa kwamaminithi eCanada kwaba yimpumelelo yokuduma. "Akukhona nje ukuthi ubumpofu buqedwe, kodwa ukuphazamiseka kokusebenza kwaba nomthelela omkhulu ekukhiqizeni," esho.
Ukunciphisa labo "abahlukumezayo ukusebenza" abahlanganyeli bokuhlola ababesebenza basebenzise isamba sabo samaminerali anciphisa ngamasenti angu-50 kuwo wonke ama-dollar abawutholile ngokusebenza.
Kodwa-ke, uhulumeni waseCanada uthe le mincane yayinomthelela omncane kakhulu ezimakethe zabasebenzi, ngamahora okusebenza aphonsa 1% amadoda, 3% abesifazane abashadile, no-5% wabesifazane abangashadile.
Ngesikhathi uhulumeni waseCanada engakaze akhiphe umbiko wokugcina ohlolweni, ukuhlaziywa okwakhicilelwe ngo-2011 nguDkt. Evelyn Ukukhohlwa eNyuvesi yaseManitoba kwaqeda ukuthi amaminerali akhiphe ukunciphisa inani elingu-8.5% ekutholeni izibhedlela edolobheni phakathi nokuhlolwa.
Ngaphezu kwalokho, kusho uDkt. Forget, kubika izingozi kanye nokulimala ngesikhathi sokuhlolwa. "Ungatshela ukuthi ingozi kanye nokulimala esibhedlela kuhlobene kakhulu nobubha," esho.
Lapho kutholakala ukuthatha isithunzi esikhundleni noma ukusebenza, uDkt. Forget wabika ukuthi ikakhulukazi omama nabasha abasanda kusebenza basebenze kancane noma bayeka imisebenzi ngesikhathi sokuhlolwa. Uthe omama omusha bahlala ekhaya ukuze banakekele izingane zabo, kanti abasha basebenza kancane ukuze bahlale esikoleni, kunokuba basisekele imindeni yabo.
Ngenxa yalokho, izinga lokuphothula iziqu esikoleni esiphakeme lithuthukisiwe ngesikhathi sokuhlolwa.
Kodwa mhlawumbe imiphumela ephawulekayo kakhulu yokuhlolwa kweminye imikhakha yaseCanada yilokhu engakaze iphindwe futhi ukuthi amaminithi awazange asebenze eCanada noma ngabe ikuphi emhlabeni.
Kodwa-ke, encwadini yakhe, umbhali uCharles Murray uyavuma ukuthi uhlelo olunjengezinkomba lungase lungabi yiqiniso ... okwamanje. "Ngaqala lokhu kuhlolwa ngokukucela ukuba unganaki ukuthi lolu hlelo aluzange lwenzeke kwezombangazwe namuhla," wabhala. "Ngiqeda ukuphakamisa ukuthi into efana nePulani ayikugwemeki kwezombusazwe - hhayi ngonyaka ozayo, kodwa esikhathini esithile."
Ingabe Ukunikezwa Kwamafutha Omhlaba Kuyophela?
Ingabe Amakhadi Ezikweletu A Ifomu Yemali?
Incazelo yeSabelo seBhajethi
Ukuthola Okungaphezu Kokuthengwa Kwamathengi kanye Nokwenyuka Komkhiqizi Ngokwezithombe
Incazelo ye-Ex Ante / Ex-Ante
Umhlahlandlela Wokuqala Wokuchaza Ukuthi Iyini Imali
Ukubala nokuqonda Amanani Wenzalo Yangempela
I-P-value - incazelo yesichazamazwi se-P-value
Ingabe Ukukhokhiswa Kwezindleko Kunokucindezeleka Kakhulu Kunama-Income Tax?
Ukulahlekelwa kwemali nokulinganisa kwezwe
Izimoto ezisetshenzisiwe eziphezulu eziyishumi ezibiwe ezibiwe
Iyini i-Term "Niche" Eshiwo Ngokwemvelo Yezinto Eziphilayo?
Izincomo Emva kokuqeda iziqu
Amakholi angamanga angama-Faux Amis 'Abangavumelani Njalo
Kuyini "kedo" ngesijeziso saseJapane?
Ukubaluleka Kuchazwe Kanjani Ubuciko
Ama-Quotes Ayishumi Nama-Ridiculous About Obamacare
Ingabe Kunendaba Lapho Uthola Gesi?
Iyini "Uhlaka" lwesiBhamu noma Isibhamu?
Uhlu LwaseNcwadini LwaseNora Roberts Oluphelele
Ukubuyekezwa kwesigxobo se-Bag Boy Revolver Pro Cart
De-Extinction - Ukuvuswa Kwezilwane Ezidlulayo
Imikhakha engu-8 enhle kakhulu yama-Comedy Kusuka kuNkulumbano ye-White House
Amakhodi we-HTML - Izincwadi ZesiGreki
Ubani Othole Ama-electromagnetism?
Izinto Ezifanele Ukwazi Ngo-Andrew Johnson
Umhlahlandlela Wezinhlobo Ezihlukahlukene Zama-Pathogens
I-Morehouse College ye-GPA, i-SAT ne-ACT Data
Ukuhumusha kwama-Verdi's Dies Irae
Yiziphi Amahlathi Okukhula Okudala?
I-Art Symbols Dictionary: Izimbali nezitshalo
I-Covenant College GPA, i-SAT ne-ACT Data
Umlando Wezingane Toys